Kedu ihe bụ ozone layer: njirimara, oghere na ọrụ | Mmeghari ohuru Green
Kedu ihe bụ ozone layer
Portillo nke German | 30/09/2021 19:00 | Gburugburu
N'etiti ọkwa dị iche iche nke ikuku, otu oyi akwa nwere oke ozone kachasị na mbara ụwa niile. Nke a bụ ihe a na-akpọ oyi akwa ozone. Mpaghara a dị na stratosphere na ịdị elu nke ihe dị ka kilomita 60 ma nwee mmetụta dị mkpa na ndụ n'ụwa. Ka ụmụ mmadụ na -ewepụta gas ụfọdụ na -emerụ ahụ na mbara ikuku, oyi akwa a agbadala, na -etinye ọrụ ndụ ya n'ihe egwu. Otú ọ dị, ruo taa, ọ dị ka ọ na -agbazi. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị nke ọma Kedu ihe bụ ozone layer.
Ya mere, anyị ga -arara akụkọ a ka ọ gwa gị ihe ozone layer bụ, kedu njirimara ya na ọnọdụ dị ugbu a na ya.
1 Kedu ihe bụ ozone layer
3 Mmalite nke ozone layer
4 Oghere na ozone oyi akwa
Iji malite ịghọta ọrụ nke oyi akwa ozone, anyị ga -ebu ụzọ ghọta ụdị gas nke mejupụtara ya: gas ozone. Usoro kemịkal ya bụ O3, nke bụ isotope nke ikuku oxygen, ụdị dị na okike.
Ozone bụ gas nke ahụ ọ na -emebi n'ime ikuku oxygen nkịtị na ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide nkịtị. N'otu aka ahụ, ọ na -ewepụta isi ísì sọlfọ na agba ya dị nro na -acha anụnụ anụnụ. Ọ bụrụ na achọpụtara ozone n'elu ụwa, ọ ga -abụ ihe na -egbu egbu nye osisi na anụmanụ. Agbanyeghị, ọ dị adị na oyi akwa ozone, ọ bụrụ na enweghị oke gas dị na stratosphere, anyị agaghị enwe ike ịpụ.
Ozone bụ ihe nchekwa dị mkpa maka ndụ n'elu ụwa. Nke a bụ n'ihi na ọ nwere ọrụ nke ihe nzacha nchebe megide radieshon ultraviolet anyanwụ. Na -elekọta ya na -amịkọrọ nke ọma ụzarị anyanwụ nke na -efegharị efegharị n'etiti 280 na 320 nm.
Mgbe ụzarị ultraviolet nke anyanwụ kụrụ ozone, ụmụ irighiri ihe ndị ahụ na -adaba n'ime ikuku atọm na ikuku oxygen nkịtị. Mgbe ikuku oxygen na ikuku atọm zutere ọzọ na stratosphere, ha na -agbakọta ọzọ wee mepụta mkpụrụ ndụ ozone. Mmeghachi omume ndị a na -adị mgbe niile na stratosphere, ozone na oxygen na -ebikọkwa n'otu oge.
Ozone bụ gas nke enwere ike ịchọta ya n'akụkụ oke ikuku eletriki na akụrụngwa ma ọ bụ ọkụ ọkụ dị elu. Dịka ọmụmaatụ, na igwekota, a na -emepụta ozone mgbe kọntaktị ahịhịa na -emepụta ọkụ. Enwere ike ịmata ya site na isi.
Mmanụ a nwere ike ịgbakọta wee pụta dị ka mmiri na -acha anụnụ anụnụ na -akwụghị chịm. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ifriizi, ọ ga -apụta odo odo. Na steeti abụọ a, Ọ bụ ihe na -agbawa agbawa n'ihi ike oxyidation siri ike. Mgbe ozone na-abanye n'ime chlorine, ọ nwere ike ịgbanye ọtụtụ ọla na, ọ bụ ezie na njupụta ya pere mpe na elu ụwa (naanị ihe dị ka pp 20), ọ nwere ike ịgbanye ọla.
Ọ dị arọ ma na -arụ ọrụ karịa ikuku oxygen. Ọ na -agbaze karịa, ọ bụ ya mere ejiri ya dị ka ọgwụ na -egbu egbu na nje na -egbu egbu, n'ihi oxidation nke nje ndị ọ na -emetụta. Ejirila ya Iji mee ka mmiri dị ọcha, bibie ihe ọkụkụ, ma ọ bụ ikuku n'ụlọ ọgwụ, ụgbọ mmiri okpuru mmiri, wdg
Mmalite nke ozone layer
A naghị aghọtakarị okwu "ozone layer" n'onwe ya. Nke ahụ bụ, echiche nke enwere bụ na n'ogo dị elu nke stratosphere enwere oke ozone nke na -ekpuchi ma na -echebe ụwa. Karịa ma ọ bụ obere, a na -anọchi anya ya dị ka a ga -asị na igwe ojii kpuchiri elu igwe.
Agbanyeghị, nke a abụghị otu. Nke bụ eziokwu bụ na ozone etinyeghị uche na stratum, ọ nweghịkwa ebe dị elu, mana ọ bụ gas dị ụkọ nke na -agbaze nke ukwuu na ikuku yana, na mgbakwunye, na -apụta site n'ala ruo n'ofe stratosphere. Ihe anyị na -akpọ 'ozone layer' bụ mpaghara stratosphere ebe mkpokọta ozone molecules dị ntakịrị (ihe ole na ole kwa nde) ma dị elu karịa mkpokọta ozone ndị ọzọ n'elu. Ma itinye uche nke ozone ma e jiri ya tụnyere gas ndị ọzọ dị na ikuku, dị ka nitrogen, bụ obere ihe.
A na -emepụta ozone ọkachasị mgbe ụmụ irighiri oxygen na -enweta oke ume. Mgbe nke a mere, ụmụ irighiri ihe ndị a na -aghọ radicals oxygen radicals. Mmiri a anaghị akwụsi ike nke ukwuu, yabụ mgbe ọ zutere molecule ikuku oxygen ọzọ, ga -agwakọta ka ọ bụrụ ozone. Mmeghachi omume a na -eme kwa sekọnd abụọ ma ọ bụ karịa.
Na oyi akwa ozone, a na -emepụta ma na -ebibi ihe ozone molecule, oxygen molecular, na atomic oxygen. N'ụzọ dị otu a, enwere nguzozi siri ike nke na -emebi ma mebie ozone.
Oghere a na oyi akwa ozone bụ mbelata mkpokọta nke ihe a na mpaghara ụfọdụ. Ya mere, na mpaghara a, radieshon anyanwụ na -emerụ ahụ na -abata n'elu anyị. Oghere ahụ dị na okporo osisi, n'agbanyeghị na n'ọnwa oge ọkọchị ọ dị ka ọ gbakere. Mgbe ọ gbakere n'otu osisi, ọ na -adị ka ọ na -eweda na ibe ya. Usoro a na -ewere ọnọdụ cyclically.
Mbibi ozone na -apụta ma n'ihi mgbanwe nke anụ ahụ n'ihi oghere elektrọnik nke mbara ụwa na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Site na mmepe akụ na ụba na ọrụ ụlọ ọrụ, mmadụ na -ewepụta nnukwu ikuku na -emetọ ikuku nke na -emebi ụmụ irighiri ozone.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ihe ozone layer bụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Kedu ihe bụ ozone layer
Ụkwụ ebe obibi